Russian warplanes ama on Swedish n'ókèala na-enweghị ikike | Apg29
A Russian ụgbọelu nke ụdị IL-20 rụrụ a ụgbọ elu n'ofe Oké Osimiri Baltic tinyere abụọ ndị ọzọ fighter ugbo elu nke ụdị su-27 flanks.
Anyị bi a oké oge, ya mere, anyị mkpa karịa mgbe ọ bụla na ikpere Jesus. E nwere ọtụtụ dị iche iche egwu megide Sweden, ma esịtidem na mpụga egwu.
More karịa mgbe anyị mkpa-ọbụna ihe doro anya na ozioma nke Jesus Christ. Ọ bụ naanị Jizọs bụ onye nwere ike ịzọpụta na-anapụta ndị mba anyị.
Zọpụtara na napụtara unu ibu mgbe gị onwe gị na-enweta Jesus dị ka Onyenwe anyị.